Libya: Eid Al – Adha 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2018 4:02 GMT
Noho ny tsy fihetsehana mihitsy teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Libyana volana vitsy lasa izay (ary mitohy hatrany) sy antsoin'ny mpamaky iray ao amin'ny bilaogin'ny Highlander hoe LDS (Libyan Disappearing Syndrome- Aretin'ny Fanjavonana Libyana). Tsy nieritreritra aho fa hisy bilaogy marobe amin'ity Eid ity. Saingy raha nanopy maso ny mpanangom-baovao ‘All Libyan blogs’ aho, dia voadona hatrany am-po hahamarika lahatsoratra vitsivitsy mipoitra etsy sy eroa mba handravana ny tsy fihetsehana maharitra.
Ny lahatsoratra androany araka izany dia tena momba ny amin'izao fotoana izao. Tsy misy drafitra na rafitra nefa tiako ny mieritreritra fa ireny no tsara indrindra, sa tsy izany?
Andro voalohany amin'ny Eid isika, ary amin'ny andro tahaka izao, matetika sahirana amin'ny fikarakarana sakafo sy ny tonotonon-kena sy izay mahazatra ataon'ny fianakaviana libiana mandritra ny Eid lehibe ny ankohonako. Matetika koa aho no matahotra ny fanomanana mialoha sy ny dingana manontolo mandra-pahadio sy mampilamina ny trano satria mitaky asa mafy sy diplomasia amin'ny fifampiraharahana amin'ny olona manodidina izany. Amin'izao fotoana izao koa dia tiako ny zava-misy fa tafaraka avokoa izahay rehetra, ny ankizy, nenitoa sy dadatoa, ny iray tampo aminy, ny raibe sy renibe ary ny ray aman-dreny ka manakoakon'ny hehy sy ny adiady ny trano.
Na dia izany aza, tamin'ity taona ity, tsy toy ny taona hafa, mahalala onony ny hasambarana, izay tsapako fa hita taratra amin'ny lahatsoratra fohy nalefan'ny ankamaroan'ireo bilaogera Libiana. Ohatra:
ary na dia zara raha mitantana ireo fiarahabana na karatra rehetra mahazatra aza ny Highlander.
Misy singa vitsivitsy izay inoako fa nandray anjara tamin'ity fahatsapana ankapobeny feno hafanam-po ity. Ny voalohany dia ny olana ara-toe-karena manerantany .
Na dia tsy manana olana ara-trosa toekarena na olana antoka (hypothèque) horesahana aza i Libya, mihevitra aho fa misy ny aretina fakàn-tahaka ary niakatra be ny vidin'ny zavatra fototra ilaina eny an-tsena.
Ny antony faharoa dia ny taha ambony amin'ny gripa amin'izao vanim-potoanan'ny ririnina izao. Raha ny hevitro dia ratsy dia ratsy ny tamin'ity taona ity tamin'ireo tranga marobe tany amin'ny hopitaly. Nahoana aho no matoky tanteraka? Satria niraikitra teo am-pandriana ny iray trano (tahaka ny ankamaroan'ny fianakaviana Libyana) izay tsy mbola nitranga teo aloha, matetika ireo tena marefo no tratran'izany, saingy tratra daholo tamin'ity indray mandeha ity ary nanoka-monina ny tenanay tao an-trano izahay.
Fahatelo dia misy ny valan'aretina madinika ‘aretina “lela mangamanga” any amin'ny biby fiompy/ondry izay nitarika ny fisondrotan'ny vidin'ny ondry izay tsy ho takatry ny Libiana amin'ny ankapobeny eto amin'ity faritry ny firenena ity. Amin'ny ankapobeny dia maro aminay no tsy afaka mividy ondry tamin'ity taona ity. AngloLibyan miresaka amin'ny maro rehefa milaza izy hoe:
“Niresaka tamin'ny fianakaviako tany Libya aho tamin'ny alina lasa teo, nilaza tamiko izy ireo fa maro ny olona tamin'ity taona ity no nanapa-kevitra tsy hividy ondry noho ny antony roa, ny vaovao mikasika ny aretina lela mangamanga izay toa namely ondry maro tany Libya ary ny antony hafa dia noho ny fitiavam-bolan'ny olona mivarotra ny ondry izay nampitombo ny vidiny ho avo kokoa noho ny mahazatra,”
Amin'ny lafiny iray, Khalid Jorni araka ny mahazatra dia manana fomba fijery tokana ary mampahatsiahy antsika ny momba ity Eid ity koa ao amin'ny lahatsoratra “‘Haji”.
“Nanaraka ny andron'i Arafah tamin'ny fahitalavitra aho androany. Tsy mazava ireo sary, manintona anao fotsiny izy ireo eo amin'ny anoloan'ny lobakao ary milaza hoe: “he tsy mahataitra!, ho avy ve ianao? Tonga eto ny rehetra, ny Aziatika, ny Kaokazy, ny Arabo, ny Afrikana … Inona no maha-ela be anao? Mitady sy mitahiry vola? Izany ve no ivavahanao amin'izao fotoana izao? “
Raha nanontany tena momba ny vidin'ny hena sy ny aretin'ny olombelona sy ny biby, dia mila ho adinontsika ny fivahinianana masina isan-taona mankany Lameka …
Na eo aza ny fihetsika tsy dia mafana loatra, hitako fa mbola misy ny feo Libyana mafana sy be fitiavana ao amin'ireo sehatra fanehoan-kevitra isan-karazany, izay mbola ifandraisan'izy ireo hatrany, ankoatra ny fifampirariana Eid Mubarak (tratry ny Eid).
Koa ity aho maneho ny feoko amin'ny firariana Tratry ny Eid Adha inshallah ho an'ny rehetra sy mirary fahasalamana, ary eto dia manantena fa hiranoka kely ny ranomandry izay nitàna ny blaogy ary hifampihaino matetika isika. Satria mihaino ny feo rehetra iIzao tontolo izao!